Real Madrid oo ka walwalsan xiddigeeda reer Brazil ee Casemiro kahor kulanka El Clásico - Hargeele - Wararka Somali State
Real Madrid oo ka walwalsan xiddigeeda reer Brazil ee Casemiro kahor kulanka El Clásico
(Madrid) 02 Dis 2019. Kooxda Real Madrid ayaa isku diyaarineysa mar xalada adag ee maalmaha soo socda ay gali doonto, maadama lagu sii dhawaanayo waqtiga la ciyaari doono kulanka adag ee El Clásico.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa ku balansan in 18-ka bishan Disembar ay wada ciyaaraan kulanka El Clásico ee lugta hore horyaalka La Liga, kaasoo ka dhici doono garoonka Camp Nou.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain xiddiga khadka dhexe reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Casemiro ayaa qarka u saran yahay inuu halis galiyo qorshaha tababare Zinedine Zidane kahor El Clásico.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Zidane uu ka cabsi qabo in Casemiro uu ka maqnaado kulanka ay kooxda Barcelona ku booqan doonaan garoonka Camp Nou, sababa la xiriira kaararka digniinta ama Jaalaha ah.
Xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Casemiro ayaa haatan u harsan kaliya hal kaarka digniinta ah si uu kaga maqnaado hal kulan safka kooxda Real Madrid.
Wargayska ayaa tilmaamay in Real Madrid ay isku diyaarineyso kulamada ay la ciyaareyso kooxaha Espanyol iyo Valencia ka hor kulanka El Clasico, waxayna ka fogaan kartaa inay la kulanto xaalad adag, haddii uu Casemiro qaato kaarka Jaalaha kulanka Espanyol, taasoo ka dhigeysa inuu ka maqnaado kaliya ciyaarta Valencia.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kulanka soo aadan ee Espanyol uu yahay kulanka ugu fiican uu Casemiro qaadan karo kaarka Jaalaha ah, si loo xaqiijiyo ka qeyb galkiisa kulanka El Clásico.
Si kastaba ha noqotee, Casemiro ayaa xubin muhiim ka ah qorshaha tababare Zinedine Zidane, tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka, isagoo ciyaaray 19 kulan ee isugu jira horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League.
Xiddig ay Cristiano Ronaldo ka wada tirsanaayeen Kooxda Real Madrid oo Lionel Messi ku tilmaamay kan ugu fiican Adduunka abid
Man City oo u gudubtay wareega Siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Southampton… +SAWIRO
Horudhac: Manchester City vs Aston Villa… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka galabta ee Premier League)